आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति लाभदायी रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ मंसिर ६ गते - Candles Khabar
गृहपृष्ठ आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति लाभदायी रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ मंसिर ६ गते
आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति लाभदायी रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ मंसिर ६ गते
उपप्रा. नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद्
श्रीगणेशाय नमः ।। आज विक्रम संवत् २०७७ साल मंसिर महिनाको ६ गते तदनुसार ईशवीय सन् २०२० अन्तर्गत नोभेम्बर महिनाको २१ तारिख, शनिवार हो । सृष्टिदेखि हालसम्म १,९५,५८,८५१२१ वर्ष व्यतीत भइसकेका छन् । कलिकालको ५१२१औँ वर्षअन्तर्गत श्री शालिवाहनीय शाके १९४२, तथा नेपाल संवत् ११४१ अन्तर्गत प्रमादी नामको संवत्सर चलिरहेको छ ।
सूर्य दक्षिणायनमा छन् । हेमन्त ऋतुअन्तर्गत कार्तिक शुक्लपक्षको सप्तमी तिथि राति १:५७ बजेसम्म रहनेछ । यो महिनाका देवता केशव र मासदेवी विशालाक्षी हुन् । सूर्य वृश्चिक राशिमा र बृहस्पति धनु राशिमा रहेका छन् । धनिष्ठा नक्षत्र दिवा ३:३३ बजेसम्म रहनेछन् । यसैगरी आज वृद्धि योग र गर करण रहेका छन् । आज सूर्योदय बिहान ६:३१ मा छ भने सूर्यास्त बेलुका ५:८ बजे हुनेछ । चन्द्रमा आज मकर राशिमा रहेका छन् ।
आज शनिवार शिवजीको उपासनाका साथै पिपलको दर्शन एवं पूजन लाभदायी रहनेछ ।
आजको राशिफल २०७७ मंसिर ६ गते, शनिवार
मेष राशिः बौद्धिक कार्यमा मन जानेछ । बोलीमा ओज रहनुका साथै कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न देखिन्छ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ ।
मिथुन राशिः चन्द्रमा आज प्रतिकूल रहनेछन् । खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहनसक्ने देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ ।
सिंह राशिः पराक्रम बढ्नेछ । मित्र लाभ हुनुका साथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन् । परोपकारी कार्यमा विशेष लागव रहनसक्नेछ ।
कन्या राशिः व्ययमा वृद्धि हुनेछ । शत्रु पक्ष सबल रहनुका साथै कार्यमा पनि अस्थिरताले राज गर्न सक्ने देखिन्छ । आज जलीय वस्तु लाभदायी रहनेछन् ।
तुला राशिः कार्यक्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । चन्द्रमाको प्रतिकूलताले गर्दा खर्चमा पनि वृद्धि गराउनसक्ने देखिन्छ । प्रेम जीवन मध्यमफलदायी रहनेछ ।
धनु राशिः पराक्रम बढ्नेछ । कला साहित्यका क्षेत्रमा रुचि रहनुका साथै कार्यप्रापितका योग पनि देखिन्छन् । भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ ।
मकर राशिः पारिवारिक सुख मिल्नेछ । आर्थिक उन्नतिका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ । लेखन कार्यमा विशेष अभिरुचि रहनेछ ।
कुम्भ राशिः शत्रुपक्ष सबल रहनेछन् । आर्थिक अस्थिरताका साथै कार्य क्षेत्रमा पनि संघर्ष र्नुपर्ने देखिन्छ । प्रेम जीवन मध्यम फलदायी रहनेछ ।
प्रकाशित समय ०४:४२ बजे
पछिल्लाे - ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा बन्द प्रशिक्षणका लागि २२ खेलाडीको नाम सिफारिस
अघिल्लाे - सरकारको दृढताबाटै समृद्धि प्राप्त हुन्छ : मन्त्री नेम्वाङ
आज मंगलवार, गणेशजी एवं हनुमानजीको उपासना लाभदायी ? हेर्नुहोस् २०७७ मंसिर ९ गते
आज कुष्माण्डनवमी, कुभिण्डो दानगर्नेदिन हेर्नुहोस् २०७७ मंसिर ८ गते
आज अष्टमीव्रत, हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ मंसिर ७ गते
आज छठपर्व, महिमासहित हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ मंसिर ५ गते
आज बिहीवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ मंसिर ४ गते